Bekujuxuza abalandela okamaskandi kwiMvunge Festival | News24
Bekujuxuza abalandela okamaskandi kwiMvunge Festival
Bekujuxuza abalendela umculo kamaskandi kwiMvunge Maskandi Festival ebise zinkundleni zemidlala KwaDukuza ngempelasonto. x
BEZIBUYA emcimbini kamaskandi Imvunge Maskandi Festival obubanjelwe ezinkundleni zemidlalo KwaDukuza Recreational Grounds ngoMgqibelo, ngomhlaka 17 kuMandulo (September).
Lo mcimbi ubuhlelwe umasipala waKwaDukuza ubambisane noMnyango wezamaCiko namaSiko KwaZulu-Natal.
IMeya yaKwaDukuza, uMnuz Ricardo Mthembu wafikelwa umgqondo wokuthi kube nalo mcimbi njenge ndlela yokugubha inyanga yamagugu uMandulo ukuze kuzokwakhe ubumbano kwimiphakathi yaKwaDukuza namaphethelo.
Kunandise abaculi bakamaskandi abahlukahlukene okubalwa kubona uKhuzani kanye noMjikijelwa.
Bebe baningi abantu abathamele lo mcimbi njengoba kubikwa ukuthi abanye bebeqhamuka ezindaweni eziqhelile njengase Greytown kanye naseGoli.
Okhulumela amaphoyisa aKwaDukuza, u-warrant officer Johannes Khoza uthe amaphoyisa athanda ukubonga nokuncoma umphakathi ohambele lo mcimbi njengoba ukwaze ukuzi phathakahle kwangaba khona zigameko ezibikwe emaphoyiseni.